Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop
Lola curiel | | General, Fitaovana famolavolana, Photoshop, Tutorials, maro
Adobe Photoshop dia manolotra fitaovana an'arivony sy hetsika haingana, maro ka indraindray dia sarotra amintsika ny mahatadidy na mahafantatra azy rehetra. Amin'ity lesona ity dia haverina amin'ny laoniny ny iray amin'ireo hetsika haingana ireo: mampiasa vola. Raha te hahalala ianao ny fomba famadihana ny lokon'ny sary amin'ny Photoshop na ny fomba famoronana sary ratsy, aza atsahatra ny famakiana ity lahatsoratra ity!
1 Sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop
2 Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop
3 Kitendry hitsin-dalana hamadika ny loko amin'ny Photoshop
Sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia sokafy ny sary izay tianay hampiharana ireo fanovana ireo. Nisafidy faritra iray, morontsiraka aho, saingy afaka misafidy ny sary tianao ianao. Tadidio fa afaka manokatra sary ao amin'ny Photoshop ianao amin'ny fitarihana azy mivantana na, raha tianao, amin'ny alàlan'ny fandehananao amin'ny menio lehibe, fisie ary kitiho misokatra. Misy ihany koa ny hitsin-dalana keyboard, command + na (amin'ny Mac) na fanaraha-maso + na (amin'ny Windows).
Vantany vao nosokafanao ny sary, Azonao atao ny mamadika ny lokony amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny menio ambony, eo amin'ny kiheba sary ary ao amin'ny menio mitete-midina dia tsindrio ny hetsika «invert». Rehefa manatanteraka an'io hetsika io ianao dia ho hitanao fa miova tanteraka ny sary ary noforonina io "sary ratsy" io.
Raha mijery ny loko ianao dia ho hitanao fa nivadika izy ireo, izay ataon'ny Photoshop amin'ny ankapobeny soloina ny pixel tsirairay amin'ny chromatic mifanohitra aminyIzany no mahatonga ny manga hiditra amin'ny volomboasary, ny voasary mankany amin'ny feo manga ary ny fotsy ho lasa mainty. Naveriko ny fanovana ireo sary hafa mba hahafahanao mahita azy mazava kokoa. Raha rehefa mivadika ny sary tsindrio ny baiko + izaho indray, mivadika indray ny loko ary noho izany miverina amin'ny kinova voalohany isika.
Kitendry hitsin-dalana hamadika ny loko amin'ny Photoshop
ny fitambaran-kitendry ny fika manampy antsika hamonjy fotoana rehefa manova na mamolavola amin'ny Photoshop izahay. Afaka mamadika loko haingana be isika raha manindry ny kitendry ao amin'ny solosaintsika ny lakilen'ny baiko + I, raha miasa miaraka amin'ny Mac isika, na fifehezana + I, raha miasa amin'ny Windows izahay.
Raha tianao ity lahatsoratra ity ary liana ianao mahalala bebe kokoa momba ny fomba fanovana loko ao amin'ny Photoshop Manoro hevitra anao aho mba hijery ireo fampianarana ireo izay hianaranao ovay ny loko ambadika sary efa ovay ny singa amin'ny singa hafa, toy ny akanjo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop
Sivana ao amin'ny Instagram
Maimaimpoana CorelDraw X5